Maxay ka dhigan tahay ku biirida Finland Ee Natto?? – Idil News
Maxay ka dhigan tahay ku biirida Finland Ee Natto??
Posted By: Idil News Staff May 13, 2022
Madaxweynaha Finland, Sauli Niinisto iyo Ra’iisal wasaare Sanna Marin ayaa labaduba sheegay in ay filayaan in dalkooda uu maalmaha soo socda go’aan ka gaari doono xubinnimada Nato.
“Xubinnimada Nato waxa ay xoojin doontaa amniga Finland. Dhanka kale, gaashaan buurta ayaa ka faa’iido doonto xubinnimadeena. Finland oo in si dhaqsa ah ay u codsato kamid noqoshada Nato,” ayaa lagu yiri qoraal ay wadajir u soo saareen labada hoggaamiye ee ugu sarreeya xukuumadda Helsinki.
Madaxweyne Niinisto oo ka jawaabaya walaaca Ruushka ayaa sheegay in eeda ay leedahay xukuumadda Moscow oo ku duushay Ukraine.
Ra’yi ururin la sameeyay todobaadkii hore ayaa muujinaysa in shacabka Finland ay 76% taageersan yihiin in waddankooda uu ku biiro Nato, halka 12% ay diiddan yihiin. Taageerada ayaa sare u kacday wixii ka dambeeyay markii uu Ruushka qaaday duullaankii Ukraine.
Finland iyo Midowgii Soofiyeet ayaa isaga hor yimid dagaalkii labaad ee dunida, waxaana ciidamada Finns ay sanadihii 1939-40 iska caabiyeen duullaan dalkooda lagu qabsan rabay.
Dagaalkaas kadib, Finland ayaa 10% dhulkeeda ku wayday heshiiskii xabbad joojinta, waxaana ay dhexdhexaad ka noqday dagaalkii qaboobaa ee u dhexeeyay Midowgii Soofiyeet iyo Dalalka Galbeedka.
Haddii Finland ay ku biirto Nato, waxa laba-laabmi doona xuduudda ay gaashaan buurtaas la leedahay Ruushka.
Xoghayaha guud ee Nato, Jens Stoltenberg, ayaa sheegay inuu filayo in hannaanka Sweden iyo Finland lagu siinayo xubinnimada gaashaan buurta uu u dhaco si degdeg ah.
Qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibedda Ruushka ayaa lagu sheegay in tallaabada Finland ay tahay mid “isbedal weyn ku samaynaysa siyaasadda arrimaha dibedda ee dalkaas”.
“Waxa uu Ruushka ku qasbanaan doonaa inuu qaado tallaabooyin aargoosi ah oo isugu jira milateri, farsamo iyo qaabab kale si meesha looga saaro khatarta amniga qaran ee ka dhasha go’aankaas.”
Hase yeeshee xukuumadda Moscow ma aanay faahfaahin tallaabooyinka ay qaadi doonto haddii Finland ay kamid noqoto Nato.
“Wax kasta waxa ay ku xiran yihiin qaabka uu noqdo isla ballaarinta cusub [ee Nato] iyo inta ay gaarsiisan tahay cudud milateri ee ku soo dhawaato xuduudaheenna,” ayuu goor sii horreysay weriyayaasha u sheegay afhayeenka Kremlin, Dmitry Peskov.